विचार र सिद्धान्तविनाको पनि कम्युनिष्ट पार्टी हुन्छ ?-अष्टलक्ष्मी शाक्य «
विचार र सिद्धान्तविनाको पनि कम्युनिष्ट पार्टी हुन्छ ?-अष्टलक्ष्मी शाक्य
प्रकाशित मिति : 21 April, 2019 6:05 pm
पछिल्लो समय पार्टीमा विचार र सिद्धान्तका बारेमा छलफल र बहस हुन छोडेको इञ्चार्ज शाक्यको भनाई थियो ।‘पछिल्लो समय पार्टीमा विचार र सिद्धान्तमा छलफल र बहस हुन छाडेको छ । विचार र सिद्धान्तविनाको पनि कम्युनिष्ट पार्टी हुन्छ ? आक्रोश मिश्रित प्रश्न गर्दै इञ्चार्ज शाक्यले भनिन्, ‘विचार र सिद्धान्तबारेमा पार्टीमा अन्य कुराको विवाद छैन, पार्टी तथा सरकारको कुनै पदमा मेरो मान्छे परेकी परेन् भन्नेमा विवाद छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि यस्तो कुरा कहाँबाट आयो ।’
उनको आक्रोश यतिमै रोकिएन । पार्टीमा विधान प्रधान नभएर नेता प्रधान बन्दै गएको उनको आरोप थियो । फरक प्रसंगमा इन्चार्ज शाक्यले मुलुकभर कम्युनिष्ट नेताहरुले सरकार सञ्चालन गरेको तर शासन शैली भने फेरिन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘एकतालाई अन्तिम रुप दिने जस्तो कुरामा केन्द्रीय कमिटीमै छलफल र विमर्श गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । त्यो सम्भव नहोला । स्थायी कमिटी बैठक त राख्न सकिन्छ होला नि ? दुई–चार जना नेताहरुको मनमौजीले निर्णय गर्नु ठिक हुँदैन । यसमा पार्टी नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ ।’
‘संघीय सरकार कम्युनिष्ट पार्टी कै छ । ६ प्रदेशमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । सस्थानीय तहमा पनि कम्युनिष्ट सरकारको बर्चस्व छ । तर जनताले राहतको महसुस गर्नु सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीमा परानै शासन शैलीको धङधङगी बाँकी गरेको देखियो । सामन्ती चिन्तन, शैली र व्यवहार अझै बाँकी रहेको देखियो । यस्तो निरंकु शैलीलाई बढवा दिनु हुँदैन ।’
यस्तै उनले कम्युनिष्ट नेताहरुमा बढ्दो तामझामका कारण जनताले प्रश्न गर्न थालेको बताइन् । ‘म सर्वसाधरणसँग यात्रा गर्छु । मलाई उनीहरुले प्रश्न गर्छन् । कम्युनिष्ट नेताहरुले सडक नै खालि गराएर जनताललाई किन दुःख दिन्छन् ? कम्युनिष्ट पनि यस्ता हुन्छर भनेर सोध्छन् । मैले के जवाफ दिने ? यस विषयमा पार्टीमा गम्भीर छलफल हुन जरुरी छ । हाम्रो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने कि नल्याउने ?’ इञ्चार्ज शाक्यको प्रश्न थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले सचिवालयले पार्टी एकताको अन्तिम टुंगो लागेपछि स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराउन माग गरेकी छन् ।
अदालतको अ’वहेलनासम्बन्धी रिट उपर प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरे
अदालतको अ’वहेलनासम्बन्धी रिट उपर सर्वोच्चद्वारा जारी निर्देशन पालना गर्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले
प्रधानमन्त्री ओलीमा नैतिकता भए राजीनामा दिनुपर्छ : प्रकाशमान सिंह
नेपाली काग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संविधानको संरक्षणमा राष्ट्रपति चुकेको बताउनुभएको छ । स्वास्थ्य मिडिया नेटवर्कले
सरकार परिवर्तनको अभ्यासमा नलाग्न दलहरुलाई आग्रह – मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकार परिवर्तनको अभ्यासमा नलाग्न दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ
ओली नेतृत्वको सरकारले नै आगामी दिनमा पनि अविचलित रुपमा राष्ट्रका लागि काम गर्ने : पार्वत गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सरकारले अविचलित रुपमा राष्ट्रका लागि काम गर्ने बताउनुभएको छ
एक महिने स्वस्थानी ब्रत भब्यताको साथ समापन गरिए
पुस शुक्ल पूर्णिमादेखि वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले घरघरमा शुरु गरेको एक महिने स्वस्थानी ब्रत शनिबार